Waayeelka Ontaariyo: Sidaad ugu diyaargaroobi lahayd XaaladDed-Deg Ah
Dadka reer Ontaariyo waxaa soofood- saaray dhammaan noocyada ka midka ah Xaalado degdeg ah, kana soo bilaabma baraf-dabeylo wata iyo korontada oo tagta (go’da) ilaa iyo duufaanno iyo shilal warshadeed.
Xaaladaha deg-degga ah wax ay dhici karaan waqti kasta, sidaas awgeed inaad ka diyaar-garowdo ayaa muhiim ah maadaama ay qaadan karto waqti inay kaalmo ku soo gaarto. Taas ayaana u sabab ah inuu qof waliba waajib isaga dhigo inuu lahaado qorshe uu ugu talo galay xaalad ded-deg ah iyo xirmo ka kooban qalab uu kaashado si uu naftiisa ugu daryeelo ugu yaraan muddo saddex maalmood ah.
Qorshehaaga aad ugu talo gashay xaalado deg-deg ah waxaa waajib ah inuu ka tarjumayo duruufaha iyo baahiyahaaga gaarka ah.
Tallaabada 1-aad: Samayso Qorshe
Marka ay dhacdo xaalad deg-deg ahi, waxaa suurtagal ah inaadan heli Karin wixii aad u baahnaan lahayd maalin walba, waxaana suurtagal noqon karta in lagaa codsado inaad ka baxdo hooygaaga. Inaad ka fekerto wixii markaas aad qabsan lahayd ayaa ah tallaabada ugu horreysa ee aad ku diyaar-garoobi lahayd.
Qorshahaagu waxaa waajib ah inuu ka koobnaado:
• Laba meelood oo aad ku badbaado waa intaasoo ay lagama maarmaan ay noqot inaad ka baxdo hooygaaga. Waxaana muhiim ah inaad joogtid meel aad ugu dhow meesha deggan tahay sida Rugta Keydka Buugaagta (Library) ama Xarunta Bulshada oo kale. Meesha kalena waxaa waajib ah iney aad ugu fogaato meesha aad deggan tahay waa intaasoo xaaladdaasi deg deg deg ahi ay saamayso aag aad u ballaaran.
• Qorshe aad kula xariirto Qoyskaaga. Marka lagu gudo jiro xaalad deg-deg ah, waxaa suurtagal noqon karta ineyna shaqeynin khadadka telefoonada iyo nidaamyada warbaahintuba. Sidaas darted, waa inaad haysatid (garatid) midamalabo qof oo adiga iyo kuwa adiga ku jecelba aad wici kartaan si aad ula xariirtaan wixii war ahna aad ula wadaagtaan.
• Liisto ay ku dhigan yihiin dadka ku siiya taageerada adiga kuu gaarka ah. Kuwaasoo ay ka mid yihiin dadka ku kaalmayn kara marka aad u baahatid kaalmadooda. Tixgeli inaad liistada ku darsatid xubnaha qoykaaga, deriskaaga, iyo dadka ka shaqeeya daryeelka-caafimaadka iyo daryeelka gaarka ahba.
• La xariir adeeg-bixiyeyaasha. Haddii qof hooygaaga jooga uu ka helo daaweyn caadi ah hooygaaga dibeddiisa ama adeegyo kaalmeed uu ku helo hooygaaga, kala shaaqee adeeg-bixiyeaha qorshe-kaabeed (meel kale oo wax la idiinku qaban karo haddii gurigiina ay ka jirto xaalad deg-deg ahi).
• La-how qof saaxiib ah. Tixgeli inaad fure labaad siisid qof aad ku kalsoon tahay una sheeg qofkaasi meesha aad ku kaydiso xirmada qalabka aad ugu talo gashay xaaladaha deg-degga ah. Diyaarso qofkaasi inuu kaa warhaayo marka ay dhacdo xaalad deg-deg ahi.
• U-diyaar-garow inaad ka baxdo hooygaaga. Qorsheyso sidii aad u tegilahayd meel badbaadsan haddii talo lagu bixiyo in guryaha laga baxo. Diyaarso Xirmo aad ku sabatabaxdo (eeg/fiiri tallaabada 2-aad).
• Qorshe u same xayawaanka aga rabbaysan ee guriga kuu jooga. Sida badan, waxaa loo oggol yahay oo keliya xarumaha dadka lagu qaabilo xayawaanka dadka u adeegga. Sidaas darteed, garo qof kuu daryeeli kara xawayaankaaga haddii lagama maarmaan ay noqoto inaad ka tegtid hooygaaga.
• Tixgelin Sii xaaladahaaga nololeed. Ma waxaad ku nooshahay bulsho aan isdhexgelin oo kala takooran? Kuna jirta Saro Dhaadheer? Adiga ama qof aad la nooshahay miyuu xadidan yahay dhaqdhaqaaqiinnu? Baro qorsheyaasha dadka lagu daadgureeyo, lana hadal maareeyaha dhismahiinna ama deriskaagaba si la idiinku sameeyo arrimo gaar ah oo la idinku daadgureeyo, haddii ay daruuri noqoto.
Marka uu Diyaar Yahay Qorshehaagu
• Kala hadal qorshehaaga qoyskaaga iyo saaxiibbadaaba.
• Bar dadka kale haddii ay jiraan baahiyo khaas ku ah adiga, oo ay ka mid yihiin sida loo adeegsado qalab caafimaad ama sida loo qaato daawo.
• Si aad si fiican u fahamto , ficil ahaan kula tababbaro oqorshehaaga kuwa kugu waafaqsan adiga inay qayb ka noqdaan shabakadda xariirka kaalmadaada kuu gaarka ah adiga.
• Ogsoonow oo raac wixii tilmaamo ah. La soco wixii warar ah ka hor ama inta lagu gudo jiro xaalad deg-deg ah. Raacna tallooyinka ay bixiyaan hawl-wadeenada iyo saraakiisha ugu horreeya ee ka jawaab-celiya xaalad deg-deg ah.
La-xariir xafiiska dawladdaada hoose si aad u hesho lambarka telefoonka aad isticmaali lahayd si aad u hesho macluumaad dheeraad ah marka lagu gudo jiro xaalad deg-deg ah (211, 311 ama mid kale). Isticmaal oo keliya 911 marka uu qof u baahan yahay kaalmo deg-deg ah si loo ilaaliyo caafimaadkooda, badbaadintooda ama hantidoodaba. Waxaa kale oo aad weydiisaa haddii ay hayaan diiwaan ay ku qoran yihiin “dad jilicsan” iyo bal inaad isqori karto si aad wax ugala qabato dadkaasi jicilidasan.
Is-qor si laguugu soo diro wixii baraarujin ah. Waxa aad isku diiwaangelin kartaa Internetka adoo adeegsanaya si laguugu soo diro baraarujin lacag la’aan ah kuna saabsan xaalado deg-deg ah oo laguugu soo diro boostada elektrarooniga ah (e-mail) ama qoraal telefoonka ah (tex message). Booqo www.ontario.ca/beprepared raacna hogaanka (links) ku gaarsiinaya macluumaadka aad rabto.
Tallaabada 2-aad: Dhis Xirmo Xaalad deg-Deg Ah
Xirmada ay kuugu jiraan waxyaabah aad si weyn ugu baahan karto haddii ay kula soo gudboonaato xaalad deg deg ah waa iney kuugu jiraan wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u badbaado una daryeesho naftaada iyo qoyskaagaba ugu yaraan saddex maalmood. Liiskan soo socda ayaa dhigaaya dhammaan wixii daruuriya ee aad u baahan karto, waana waxyaabo dabooli kara baahiyahaaga adiga kuu gaarka ah, iyo waxyaabo waajib ah inaad diyaarsato haddii ay dhacdo inaad ka baxdo hooygaaga.
Wixii aad ku ridan lahadyd Xirmada Sabatabaxaaga
□ Cunto iyo furaha lagu furt wixii qasac ah oo dhan (ahna wixii aan xumaanayn diyaarintooduna ay sahlan tahay, oo kugu filan 3 maalmood)
□ Biyo (4 Litir qofkiiba maalin kasta)
□ Toosh (Karbuuno)
□ Raadyow (kan gacanta lagu buuxiyo am mid beyteri ku shaqeeya)
□ Beytariyo (dhagxaan) dheeraad ah
□ Dareeraha lagu nadiifiyo gacmaha ama shukumaan-waraqeedka dharabka leh
□ Xirmada Gargaarka Deg-degga ah (First Aid Kit)
□ Warqado Muhiim ah (sida kuwa aqoonsiga, liistooyinka dadka aad la xariirto, nuqullada warqadaha uu takhtarku kuu qoray si aad daawo ugu qaadato, I.w.m)
□ Lacag caddaan ah (iyo Hal furaha Baabuurkaaga oo dheeraad ah)
□ Firimbi /siidhi (si aad usoo jiidato ihtimaamka dadka, haddii loo baahdo)
Tixgelin Gaar Ah
□ Saad daawooyin ah iyo qalab(ul, aalad qofka aan socon-karin uu ku socdo, wax dhegaha la gashado oo maqalka kordhiya, qalabka neefsashada, i.w.m.)
□ Warqad takhtar uu qoray oo lagu qaadan karo okiyaale iyo cago-gashi
□ Ilko samays ah oo la gashado (dentures) iyo saadkoodaba
□ Cuntada xawayaanka la rabbaysto iyo saadkoodaba haddii aad leedahay xawayaan aad rabbaysatay.
Saad Daad-gureyn oo Dheeraad Ah
□ Dhar, kabo
□ Xallaafka Hurdada ama buste
□ Waxyaabaha Shakhsi ahaan loo isticmaalo (sida saabuunta, daawada ilkaha lagu rumeydo, iyo waxyaabaha kale ee lagu isticmaalo musqulaha)
□ Kaararka lagu cayaaro (turubka) ama geymka la cayaaro marka la safrayo
• Alaabtaasi oo dhan ku dhex rid shandad kiish cago leh oo ay hawlyar tahay qaadistoodu.
• Ku xafido xirmada sabatabixintaada waqtiga xaaladaha deg-degga ah meel aad is fudud u tiigsan/ gaari kartid.
• Korontada si fiican ugu sii buuxso telefoonkaaga gacanta ama qalabkaaga aad wax kula xariiri karto ee aad qaadan karto.
MACLUUMAAD KU SAABSAN QORSHAHAYGA XAALADDA DEG-DEGGA AH
Buuxi foomamka soo socda kuna xafido meel adiga iyo dadka kaleba aad ka heli kartaan. Siina cusbooneysii sida kolba loogu baahdo. Kuna xafido hal nuqul xirmada sabatabaxaaga kuna saabsan xaalad deg-deg ah.
Dadka Aan la Xariiraayo Si Ay ii Kaalmeeyaan
Liist-garayso dadka hore kuu caawin jiray iyo kuwa kale ee ku kaalmayn kara haddii ay timaado xaalad deg-deg ahi: sida takhaatiirta, farmashiistayaasha, hawl-wadeennada kaalmooyinka gaarka ah qabta, shaqaalaha daryeelka guryaha gudahooda (kuwaasi oo ay ka mid yihiin adeeg-bixiyeyaasha kaydka ah, iyo weliba qoyska, asxaabta, iyo deriskaba.
Meelaha Aan Ku Badbaadi Karo
Marka ay timaado xaalad deg-deg ahi, waxaa suurtogal ah inaad u baahatid inaad ka tegtid hooygaaga. Sidaas darted liist-garayso (qoro) laba meelood oo aad tegi doonto, meel adiga kuu dhow, iyo meel kale oo adiga aad kaaga durugsan/fog ( kana baxsan xaafadda aad deggan tahay). Dhowr tusaale haddii aan soo qaadanno waxaa meelahaasi kamid ah Rugta Kaydka Buugaagta oo maxalli ah, meel lagu cibaadaysto, ama xarun bulsho.
Qorshaha Aan Kula Xariiraayo Qoyskeyga
Marka ay jiraan Xaalado deg-deg ahi, waxaa suurtaagal noqon karta iney xaaladahaasi saamayn ku yeeshaan khadka telefoonka maxalliga ah iyo shabakadadaha warbaahinta iyo Boostada Elektarooniga ah (E-mail) Sidaas awgeed, garo qof ka baxsan baladkaaga/magaaladaada oo adiga iyo xubnaha kale qoyskuba aad la xariiri kartaan si aad war ahaan isugu xirmataan una wadaagtaan. Haddii markaas taasi ay noqoto wax aan la heli karaynin, tixgelin sii xarun bulsho ama dhaqameed.
Macluumaad Caafimaad oo Muhiim Ah
Qofkasta oo ka tirsan qoyskaaga, qor oo xasuuso wax allaale wixii xaalado caafimaad iyo baahiyo gaar ah oo uu leeyahay, iyo weliba wixii daawooyin ah ee uu qaato iyo qalab wixii uu isticmaalo.
Meesha ay Yaallaan Xirmada Sabatabaxa Xaaladdayda Deg-Degga Ah
Qor meesha ay ku kaydsan tahay xirmadaadu, si dadka kale ay u heli karaan haddii ay ku kaalmaynayaan.